I-Semalt: I-Mirai (DDoS) Ikhodi Yomthombo Nendlela Yokuzivikela Ngayo
Ngemuva kokuthuthukiswa kwekhodi okusetshenziselwa ukwenza i-hack enkulu ku-intanethi, i-Artem Abgarian, iThe i-Semalt Imenenja yePhasimende eMpumelelo enkulu, ikholelwa ukuthi sisekuqaleni kokuhlaselwa kwamanye ukuhlaselwa kwe-intanethi. Abakhi bekhodi baklanyelweukuze ihlose amadivayisi angaxhunyiwe axhunyiwe. Lokho kufaka phakathi amakhamera, ama-routers, amafoni namanye amadivaysi asebenzayo. Ikhodi ikhombisakubo futhi abaphendulela kuba "auto bots", okuyinto ke ahlose amawebhusayithi ngenhloso ukuzitholela ungaxhunyiwe ku-intanethi.
Abahlaziyi bezokuphepha beWeb shayela ikhodi "Mirai". Kwangemva kokuhlasela okuphawulekayoiwebhusayithi yeblogi yokuphepha ebizwa nge-Krebs On Security. UBrian Krebs uyisazi sokuphepha kanye ne-blogger yezilwane. Uqokomise ukushicilelwaikhodi evele esithangamini sabasakazi beviki eledlule.
Kwesinye sezihloko zakhe, uKrebs uxwayisa ngokuhlaselwa okwandayo kwi-InternetAmadivayisi wezinto (IoT). Abahlaseli, abanesibopho salezi zihlaselo basebenzisa la madivaysi ukuze bombard amawebhusayithi nge izicelo, ukwakha traffic ngokwanele kuyaoverload the server. Ngenxa yokungakwazi ukunikeza zonke izivakashi zabo okuqukethwe okudingayo, iwebhusayithi iyavala ekugcineni.
Abahlaseli baye basebenzisa ngaphambilini ukuhlaselwa DDoS esikhathini esidlule ukuze knock out amawebhusayithi. II-UK iyisizwe sesibili esihlosiwe ngemuva kwe-United States. 'Ukuhlasela kweDDoS kuhlose imishini ethile, amaseva noma amawebhusayithi. Ziyi-auchungechunge noma inethiwekhi ye "botnets" esebenza ndawonye ukwenza izicelo ezilula kwiwebhusayithi..Bacela ulwazi ngesikhathi esifanayo futhiibhomu kuze kube yilapho ligcwala futhi lingakwazi ukusebenza.
Uma i-hacker ikwazi ukukhomba idivayisi esengozini exhuma kwi-intanethi.Bangakwazi ukuhlanganisa lezi zingozi ekugqilazweni ukuba baxhumane nesiphakeli esiphakathi. Ayingaziwa kumsebenzisi, enza ukuhlaselwaukusebenzisa la madivaysi kwandisa umthelela walo kakhulu.
Ku-Krebs icala, ukuhlasela kwe-DDoS kwanyathelisa i-Krebs kuwebhusayithi yezokuphepha ngokupheleleama-gigabyte angu-620 wedatha ngowesibili. Kuyinto engaphezu kokwanele ukuthungatha amawebhusayithi amaningi okwamanje.
UBrian Krebs, umnikazi, kubike ukuthi i-malware ye-Mirai isakazeka kulaba abasengoziniamadivaysi ngokukhahlaza i-intanethi ukucinga amadivaysi we-IoT avikelwe izilungiselelo zefektri ezenzakalelayo, noma amagama abasebenzisi abasebenzela kanzima namaphasiwedi.
Imvelaphi nomnikazi wekhodi ahlale engaziwa. Nokho, umuntu lowowenza ukuthunyelwe kwekhodi kusetshenziswe igama lomsebenzisi "Anna-senpai". Bathi baye baqasha futhi bazuza ukulawula kwezinkulungwane zamadivayisi njenge-arsenal yabo.Esikhathini esitatimendeni se-intanethi, i-hacker yathi izinyathelo zokuqapha ezithathwe ngamawebhusayithi ukuhlanza izenzo zabo zenze i-tooth ngaphakathiukuphumelela kwe-malware. Noma kunjalo, ikhodi iyaqhubeka nokuthola amadivayisi amaningi kakhulu.
Siyabonga nge-Mirai malware, izigidi zamadivayisi angathintekayo axhunyiwe zimileengcupheni ekulawulweni okuphoqelelwe ngabaduni futhi aphenduke ama-botnets ukukhomba amawebhusayithi. Ekuxoxweni nge-MailOnline, Tony Anscombe we-AvastUkuphepha kuthiwa wonke amadivaysi asebenza njengamaphuzu okufinyeleleka kwabaduni. Lokhu kungabaza indlela abakhiqizi kanyeabasebenzisi bavikele lawa madivayisi.
Enye yezindlela ezingcono kakhulu abasebenzisi abangazivikela amadivaysi azo ukugcina amadivayisi aboup-to-date futhi uhlale ukhangele noma yikuphi ukukhishwa kwabakhiqizi. Okwesibili, ilogi elondekile ngemininingwane ngegama lomsebenzisi nephasiwedi, ehlukilekusuka kuzilungiselelo ezizenzakalelayo kuyindlela enhle yokugcina la madivayisi ephephile. Okokugcina, abasebenzisi kumele basebenzise noma yikuphi umkhiqizo wokuphepha, osebenza ku-aidivayisi, engasiza ukuvimbela ukuhlaselwa.